Oo halkan waa Apple Watch Series 5 - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Oo halkan waa Apple Watch Series 5
Apple waxay qabatay Talaadada 10 Sebtember muuqaalkeedii caadiga ahaa ee iPhone-ka cusub. Marka lagu daro jiilkan cusub ee taleefannada casriga ah ee apple-ka, shirkadda Cupertino waxay sidoo kale daaha ka rogtay Apple Watch Series 5. Waa tan waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan smartwatch-ka.
Sannadkii la soo dhaafay ee Apple Watch Series 4 wuxuu ahaa isbadal weyn ee safka Apple Watch. Moodeelkani wuxuu ubaahanyahay naqshad waxyar laga badalay, oo leh shaashad balaaran gaar ahaan. Hadaad wali rajeynayso isbadel markan, waad niyad jabi doontaa laakiin taasi taa macnaheedu maahanApple Watch Taxanaha 5 ma aha cusbooneysiin mudan in magaca la istaahilo. Marka adigoon sii korsan warka oo dhan taas waxaan ka dhex heli doonnaa jiilkan cusub ee saacadaha isku xiran.
Taxanaha Apple Watch 5 waa mid rasmi ah
Apple waxay ku faantaa inay ku dhawaaqday, iyada oo taxanahan 5 ah, shaashadda had iyo jeer la sameeyo (ugu dambeyntii) muuqaalkeeda. Kuwa aan aqoon, shaashadda Apple Watch si otomaatig ah ayey uga baxday ilaa hadda markii curcurka uu hoos u dhacay. Si aad shaashada shaashada ugu aragtid, waa inaad kor u qaadday curcurkaaga, sidii aad u arki lahayd saacad dhaqameed. Iyada oo shaashadda had iyo jeer-on, looma baahna. Shaashadda su'aasha ayaa ah shaashadda LTPO oo awood u leh xaddiga dib-u-cusboonaysiinta, inta u dhaxaysa 1 iyo 60 Hz. Tani waa inay gacan ka gaysato ilaalinta madax-bannaanida saacadda. Intaa waxaa dheer, Apple waxay ku dhawaaqeysaa saacadaha 18 madax-bannaanida, sidii ay horay u ahayd. Shaki iigama jiro inbadan oo adeegsadayaashu doorbidi lahayeen horumar xaga markan laakiin waxaa daruuri noqon doonta in lagu qanciyo iswada oo isku mid ah - way yarayn lahayd -. Waxaa sidoo kale jiri doona dhammaan wicitaanno cusub oo saacad ah, oo si gaar ah loogu sameeyay shaashaddan had iyo jeer ah, iyo sidoo kale isbeddelo ku jira is-dhexgalka, oo had iyo jeer ku habboon shaashaddaan cusub.
Iyada oo leh shaashaddeeda had iyo jeer ah, laga bilaabo 449 €
Ka sokow isbeddeladaas qalabka, Apple wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa codsi cusub oo kombuyuutar, codsi loo malaynayay inuu muhiim u yahay jiilalka hore ... Ka wanaagsan xilli dambe. Sida la sheegayo, Apple Watch Series 5 waxaa lagu bixin doonaa aluminiumka iyo bir daxalowda ah laakiin sidoo kale alwaax badan iyo alwaax qaali ah. Jaangoynta dhinaca, Apple Watch oo leh GPS ayaa laga iibin doonaa 449 €, nooca taleefanka gacanta laga bilaabo 549 €. Horudhac waa mar horeba furan, avulabilities-yada ugu horreeya waxaa lagu dhawaaqay 20 Sebtember.
Mustaqbalka Apple Watch wuxuu kugu xaqiijin karaa maqaarkaaga maqaarka oo keliya
Nidaamka raadinta hurdada oo ka sii fiican Apple Watch ee soo socda?
Apple waxay Bilaabeysaa Barnaamijka Dayactirka Shaashadda ee Bilaashka ah ee loogu talagalay Apple Watch
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/et-voici-lapple-watch-series-5-327019